Maqaalka Andrey Koptelov on Martech Zone |
Maqaallada by Andrey Koptelov
Andrey Koptelov waa falanqeeye hal-abuurnimo ah oo ka socda Itransition, oo ah shirkad horumarin ku sameysa barnaamijyada gaarka loo leeyahay oo xarunteedu tahay Denver. Isagoo khibrad qoto dheer u leh IT-ga, wuxuu wax ka qoraa tikniyoolajiyadaha cusub ee carqaladeeya iyo hal-abuurnimada IoT, sirdoonka farsamada, iyo barashada mashiinka.
Axad, Disembar 20, 2020 Axad, Disembar 20, 2020 Andrey Koptelov
Iyada oo dad badani ay ku lug leeyihiin shabakadaha internetka ee internetka maalin kasta, warbaahinta bulshada ayaa noqotay qayb lama huraan u ah xeeladaha suuqgeynta ee ganacsiyada noocyadooda kala duwan. Waxaa jiray 4.388 bilyan oo isticmaaleyaasha internetka adduunka oo dhan sanadka 2019, 79% ka mid ahna waxay ahaayeen isticmaaleyaal bulsho oo firfircoon. Warbixinta Caalamiga ah ee Warbixinta Dijital ah Markii si istiraatiijiyad leh loo isticmaalo, suuqgeynta warbaahinta bulshada waxay gacan ka geysan kartaa dakhliga shirkadda, kaqeybgalka, iyo wacyigelinta, laakiin si fudud u noqoshada warbaahinta bulshada micnaheedu maahan adeegsiga